Netherlands weghachitere ihe mgbochi COVID-19 n'etiti ọhụụ ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Netherlands weghachitere ihe mgbochi COVID-19 n'etiti ọhụụ ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista Dutch kwuru na ọ dị mkpa ka a kwụsị ndị ile ọbịa na ndị na-ahụ maka ndụ abalị n'ihi ịrị elu nke ụdị Delta dị iche iche na-efe efe.
Netherlands na-eweghachite mgbochi COVID-19 maka ụlọ ịgba egwu abalị, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ememme egwu.
Mgbapu ohuru etinyere n'ihi nsogbu na-ebute ọrịa n'etiti ndị na-eto eto.
Restaurantslọ nri na ụlọ mmanya niile na Netherlands ga-emechi ụzọ ha site na etiti abalị ruo elekere isii nke ụtụtụ kwa ụbọchị, ebe a ga-amachibido egwu dị ndụ.
Mịnịsta Ala Dutch Mark Rutte kwupụtara na gọọmentị Netherlands na-eweghachi ihe mgbochi COVID-19 maka ụlọ oriri na nkwari abalị, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ememme egwu n'ihi ọnụọgụ ọnụọgụ nke ikpe coronavirus ọhụrụ n'etiti ndị na-eto eto.
Ihe mgbochi COVID-19 ahụ eweghachiri, bụ nke e buliri na June 26, ga-arụ ọrụ na ụtụtụ echi wee nọrọ ebe ruo August 14, Rutte kwuru na Fraịde
Mgbe ọ gosipụtara n'akụkụ Minista Ahụike Hugo de Jonge, PM kwuru na ile ọbịa na ndị na-ahụ maka ndụ abalị kwesịrị imechi n'ihi ịrị elu nke ụdị Delta dị iche iche na-efe efe.
Rutte kwuru na gọọmentị ga-ekwe ka ihe omume ọha na-eme otu ụbọchị na ebe ndị jupụtara na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ, ndị na-ekiri ekiri ga-egosipụtakwa ọgwụ mgbochi na ọnọdụ ọrịa ha.
Restaurantslọ oriri na ọ barsụ Allụ na ụlọ mmanya niile dị na Netherlands Ọ ga-adịkwa mkpa imechi ọnụ ụzọ ha site na etiti abalị ruo elekere isii nke ụtụtụ kwa ụbọchị, ebe a ga-amachibido egwu dị ndụ egwu.
A ga-akwụsị usoro ịnye tiketi iji kwe ka ndị mmadụ pụọ na iwu ime mmekọrịta mmadụ na ibe ya ruo ọnwa na-abịa, mgbe gọọmentị ga-enyocha ọnọdụ ahụ.
De Jonge kwuru na mmụba ndị ahụ butere ọrịa na nso nso a metụtara ndị na-eto eto, mana ọ dọrọ aka na ntị na ọ bụ "ihe a na-apụghị izere ezere" na ndị agadi ga-ebute ọrịa ọ gwụla ma gọọmentị mere ihe.
N'ime izu gara aga, ọnụọgụ ọhụrụ nke COVID-19 na Netherlands bilitere site na 103% ma e jiri ya tụnyere ụbọchị asaa gara aga, nyocha ọhụrụ nke National Institute for Health Public na gburugburu ebe obibi gosipụtara.